Voasambotra Ilay Lehiben’ny Zava-mahadomelina Nokarohina Fatratra Tao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2015 2:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Türkçe, Español
Notanana ao Meksika ny Lehiben'ny rongony Meksikana, Servando Gomez, antsoina hoe “La Tuta”. Pikantsarin'ny YouTube.
Voasambotra tamin'ny 27 Febroary tao amin'ny fanjakan'i Michoacán.i Servando Gómez, La Tuta na El Profe (Ilay Mpampianatra), voalaza fa lehiben'ny fikambanan-jiolahy Meksikana fantatra amin'ny anarana hoe Los Caballeros Templarios (Mpiantsoavalin'ny Tempoly).
Misy ny sasany mihevitra fa anisan'ny ahiahiana karohina fatratra indrindra ao amin'ny firenena i Gómez ary miampanga ny Caballeros Templarios ho nampitombo ny herisetra izay namely an'i Michoacán nandritra ny volana maromaro. (Nitatitra izany herisetra izany ny Global Voices teo aloha.)
Voasambotra i Gomez herintaona taty aorian'ny fisamborana ilay lehilahy tadiavina fatratra manerana izao tontolo izao, lehiben'ny zava-mahadomelina Joaquín Guzmán, fantatra amin'ny hoe El Chapo. Anisan'ireo fikambanan-jiolahy mahery vaika rava nandritra ny fitondran'ny filoha Meksikana Enrique Peña Nieto ireo fisamborana ireo, ankilan'ny fitànana am-ponja ilay mpitarika sendika Elba Esther Gordillo, La Maestra, izay voampanga ho nandany tsy ara-dalàna ireo famatsiam-bola azony.
Iray andro alohan'ny fisamborana an'i La Tuta, nanoratra izay heverina ho fanombanana mialoha diso tanteraka ilay mpanao gazety Carlos Loret de Mola:
Satria efa nikoy ankehitriny i El Chapo, izay ilay lehilahy notadiavina fatratra ao Meksika? Misy ireo mety mihevitra fa i Servando Gómez Martínez, La Tuta, lehiben'ny fikambanan-jiolahy Los Caballeros Templarios izany. Saingy tsy izany. Angamba izy no karohina fatratra voalohany indrindra, saingy tsy izay no tena mivoitra. Mahafantatra ny loharanom-baovao maromaro fa very be dia be ny ambaindain'ny fahefan'i La Tuta, satria tsy nandefa lahatsary intsony izy … na ny fanambarany am-peo aza tsy heno intsony.
Ny “horonan-tsary” nolazain'i Loret (lahatsary manala-baraka ireo mpanao politika tamin'ny fivoriana miafina tsy ara-dalàna, sy ireo hafatra hoan'ireo tandapa ary ny vahoaka) no fampiasain'ny La Tuta havoaka an-gazety, tamin'izy mbola natanjaka ara-pahefana.
Nitatitra vaovao momba ny fisamborana an'i La Tuta tao amin'ny Twitter ny Onjam-peo Así Las Cosas, ary nanamafy ihany koa ny mbola tsaho teo aloha: Nametra-pialàna ny mpampanoa lalàna Jesús Murillo Karam.
Voasambotra i La Tuta. Niala i Murillo Karam. Indreto ny zotrantsika ry @WRADIOMexico.
Voapaingotra ny mpampanoa lalàna Murillo Karam noho ny fifandirankevitra mikasika ny andraikiny manoloana ny famotoroana ny herisetra izay nitranga tao Ayotzinapa. (Vakio ny fitantarana manokana ato amin'ny GV.)
Mpisera Twitter Madame Déficit kosa nihevitra fa tafiditra am-ponja ny olon-diso, ary nanoratra fa mbola miriaria any ireo mpanao politika tahaka ny Governora Ángel Aguirre, izay nametra-pialana noho ny raharaha Ayotzinapa raha any am-ponja kosa ireo mpanao heloka bevava hafa.
Vosambotra i El Chapa sy La Tuta; saingy mbola afaka miriaria any ireo mpanao politika meloka (tahaka an'i Angel Aguirre sy Godoy Toscano, raha tsy hilaza afa-tsy ireo) #tsymatymanota.
Nanamarika ny fotoana mahalasa saina nisamborana an'i La Tuta, izay nitranga volana vitsy alohan'ny fifidianana tao Meksika ilay mpisera Twitter Luis Díaz.
Eny, tsy mahagaga ny fisamborana an'i La Tuta, taom-pifidianana izao.
Tao anatin'ny ora vitsy, nanao fanambarana ofisialy ny manampahefana Meksikana, nanamafy ny fisamborana ity lehiben'ny zava-mahadomelina malaza ity.